Teknika fandokoana sary amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Tsy mitovy teknika fandokoana sary amin'ny Photoshop Mba hanomezana fiainana ny sary nataontsika, amin'ny alàlan'ny fampiasana loko nomerika dia azontsika atao ny mandoko ny sarintsika amin'ny fomba mora sy mahazo aina noho ity programa ity avy amin'ny tranon'ny Adobe. Alefaso amin'ny solosainao ny sarinao ary atombohy fandokoana izany mampiasa fitaovana matihanina izay hamela anao hamorona karazan-tsoratra sy fitambarana loko rehetra.
Raha maniry ny hanao sary ianao ary te hanomboka asehoy amin'ny fomba matihanina afaka manomboka manao izany ianao Photoshop, Ity programa ity dia hahafahanao mampifangaro ny sary amin'ny retouching miaraka amin'ny sary sy teknika hafa azonao eritreretina. Haingam-pandeha, tsotra, tena intuitive ary mety raha ampiasaina amin'ny teknika maro.
Photoshop mamela antsika asehoy amin'ny fomba maro samihafa miankina amin'ny filàna, azontsika atao ny manazava amin'ny alàlan'ny penina, borosy, sary (namboariny) ary ny karazana teknika mety misy, ary ny fisaintsainantsika ihany no fetra. Amin'ity tranga ity dia hanao izany isika asio loko ny sary tsipika amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana anatiny isan-karazany ao amin'ny programa: wand sy borosy mazika.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia mitadiava sary tsipika (sketch) izay nanisy tsipika tsara ahafahana mandoko azy tsara kokoa, ireo tsipika ireo dia azo esorina aorian'izay raha mitady valiny tsy misy andalana isika.
Vantany vao misokatra ny sary Photoshop ny zavatra manaraka ataontsika dia Ataovy mitovy ny sosona lehibe an'ny sary hanana backup. Misafidy ny fitaovana izahay ny resaka majika avy amin'ny sisin'ny sidebar an'ny Photoshop ary mamorona fisafidianana ireo faritra tianay hoso-doko izahay, dia hisafidy ireo faritra tianay hanana loko mitovy. Aorian'io rehefa vita ny safidintsika dia hamorona sosona vaovao isika ary hampihatra ny loko eo aminy. Raha mampihatra ny loko dia azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny borosy sy ny fandokoana azy na ny famenoana ireo faritra amin'ny fanitsiana / famenoana. Io fomba io dia ahafahantsika miasa amin'ny fomba madio sy milamina kokoa.
La fomba faharoa hametahana loko miaraka Photoshop dia mandoko ny sary amin'ny borosy. Raha te-hanao an'izany dia tokony apetraka ao anaty ny sosona ny sary multiply mode, Ity safidy ity dia hita eo ambonin'ny sosona (manova ara-dalàna amin'ny fampitomboana) hamela antsika asio loko fa tsy very ny tsipika fanaovana sary. Azontsika atao ny manova ny hamafin'ny borosy sy ny opacity raha mitady valiny malemy kokoa sy miharatsy kokoa amin'ny fikorotanana isika.
Toy ny manao sary amin'ny tanana Photoshop mamela antsika hampiasa borosy manokana izay maka tahaka ny teknika fanaovana sary plastika (saribao, pensilihazo, marika… sns) izany dia fanampiana lehibe ho an'ireo tia sary izay mitady fitaovana hiasa amin'ny fomba matihanina sy milamina kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Teknika fandokoana sary amin'ny Photoshop